UDolores Redondo kunye noMarcos Chicot, ophumeleleyo kunye nowokugqibela kwi-2016 Planeta Award | Uncwadi lwangoku
UDolores Redondo kunye noMarcos Chicot, ophumeleleyo kunye nowokugqibela kwi-2016 Planeta Award
UDolores Redondo uqokelela imbasa ye-2016 ye-Planeta ekhatshwa ngowokugqibela, uMarcos Chicot Álvarez (ngasekunene), kunye neeMajesties zabo (ngasekhohlo).
Emva kweevoti ezine, amabini kumakhulu amahlanu anamashumi amahlanu anesibini amagama angeniswe kwi-2016 Planeta Prize ayekhuphisana ngebhaso lesibini ngobukhulu loncwadi kwihlabathi phakathi kwamakhulu ezinto, amarhe kunye nababhali abazifihlileyo. Ngaphantsi kwegama elinguSol de Tebas, UDonostiarra Dolores Redondo, umbhali wodumo lweBaztán trilogy, wanikwa ibhaso lePlaneta ka-2016, ngelixa uMarcos Chicot Álvarez waba ngowokugqibela kumlobi we-The Murder of Socrates.
URedondo kunye nenoveli malunga nokubawa
Kule mpelaveki, iPremio Planeta ibilindeleke ukuba iqeshwe ngonyaka we-15 ka-Okthobha, ibhiyozela isikhumbuzo seminyaka engama-65 sokhuphiswano olwasekwa nguJosé Manuel Lara Hernández ngo-1951. Ithuba apho iqela lePlaneta lithathe ithuba lokucinga nzulu ngemarike ethembisayo kunaleyo yeshumi elinesihlanu leminyaka eyadlulayo, ukulahla amagqabantshintshi angaqhelekanga ngeNobel kaDylan kodwa, ngaphezulu kwako konke, ukudala ulindelo lonikezelo olwenzeke phezolo e iPalau de Congressos de Catalunya.
Ngorhatya, oluqale nge-20: 30 ngokuhlwa, liwonga iwonga la mabhaso: abezopolitiko, abantu abadumileyo kunye nabanye ababhali abafihliweyo phantsi kwegama elingelolakho kunye nemithambo-luvo emininzi, nangona igama elinye livakala kakhulu kunezinye iiyure phambi koziso: Dolores Redondo.
Okokugqibela, nasemva kweevoti ezintlanu apho Iinoveli ezili-10 ezikhethiweyo Baphikisana nebhaso, i-ode kwinyani yomlingo ebizwa ngokuba yi-El Camino de Santiago yawa, kwavulwa i-duel ye-titans phakathi kwencwadi ethi Ukuzalwa, ngu-Óscar García (isibizo) kunye noSol de Tebas, nguJim Hawkins (isibizo-mbumbulu), esokugqibela ophumelele i-601 lamawaka eeros yebhaso.
Isazisi phantsi komlinganiswa kaStevenson? UDolores RedondoEwe kunjalo, ngubani ongenakunceda kodwa aqhubele phambili ukuya kwiJury kunye neeMajesties zabo phantsi kwe- «Hayi, hayi. . . » eqinisekisa isimanga esingeketyiswa. "Namhlanje ulifezekisa iphupha endilixabisileyo ukusukela ebusheni," uqinisekisile ngokuzolileyo. "Ndiyinikezela kuthando lwam, kwaye hayi, ayizizo i-Illuminati njengoko uninzi lwenu lucinga," wongeze ngokuhleka.
Isihloko sokwenene sikaSol de Tebas sityhilwe njenge Ndiza kukunika yonke le nto, ichazwe nguRedondo uqobo "njengenoveli malunga nokubawa.", kwaye ikhuphela ivesi kaMateyu 4-9. Ukugcina isitayile esimnyama se trilogy yaseBaztán, ethengise ngaphezulu kwama-700 amawaka eekopiUmbhali waseSan Sebastian utshintsha irejista ebonisa ibali likaManuel, umbhali oya kuchonga umzimba womyeni wakhe, u-Álvaro, osweleke ngexesha lengozi yemoto ekrokrisayo. Ibali liwela ezona ndawo zichanekileyo zeGalician Ribeira Sacra apho umlinganiswa kaManuel azama ukuveza ukuba ngubani owenzekileyo enkosi ngoncedo lomfundisi ongumhlobo womfi kunye nonogada woluntu odla umhlala-phantsi. Emva kwesiqwenga, ubukho beentsapho zaseGalikhi ezibekekileyo zichazwe njenge "zingenzi nto kwaye zikhohlakele" kunye nomoya womhlaba olawulwa ngabantu ngaphezulu kweminyaka engama-2 XNUMX.
UChicot valvarez: uhambo oluya eGrisi yamandulo katata ongumbhali
Owokugqibela kwi-2016 Planeta Prize kwaye, ke ngoko, ophumelele ibhaso le-150.250 le-euro waya kwisazi ngengqondo saseMadrid uMarcos Chicot Álvarez, linoxanduva lwento ebiyiyo I-ebook ethengisa kakhulu eSpanish phakathi kuka-2013 no-2016: Ukubulawa kukaPythagoras. Yimpumelelo athe wakwazi ukuyidibanisa kunye nokubhalwa kwinoveli ebizwa ngokuba kukuzalwa kunye nesihloko sayo esatyhilwa njenge Ukubulawa kukaSocrates.
Ukusekwa ngo-437 BC kwaye yaphuhliswa ngaphezulu kweminyaka engama-26 eyadlalwa yiMfazwe yasePeloponnesia, Ukubulawa kukaSocrate kuphakamisa uhambo oluya kwiGrisi yamandulo, kubomi bayo bemihla ngemihla, kubakhandi bentsimbi nakwababumbi abajike baba ngamagorha. Incwadana igxininisa kulowo uthathwa njengefilosofi enkulu kunabo bonke, uSocrates, oya kuthiwa u-Delphi uya kufa ezandleni zomntu obonakala ngokucacileyo. Kwangelo xesha, uQuerefonte, umfundi kunye nomhlobo wakhe, utsaleleka kuPerseus kunye namehlo akhe aphantse abonakale.
Ukucaciswa kwenoveli nguChicot valvarez akuzi ngaphandle kwemvelaphi engashukumiyo kwaye ekhuthazayo.
Yonke le nto yaqala ngo-2009, unyaka ekwazalwa ngawo intombi yesibini yombhali, uLucía, ene-Down syndrome, eyakhokelela ukuba umbhali azibekele iinjongo ezizokuvumela ukuba intombi yakhe iphile kwaye kwangaxeshanye kugxilwe kwi-100% inkalo yakhe yoMbhali. Uyinkuthazo kunye nenkuthazo epheleleyo yenoveli ethathe ngaphezulu kweminyaka emihlanu ukuyenza. "Ukuba ibingenguye, bendingazukuqhubeka nokuba ngumbhali," utshilo umbhali emva kokufumana iwonga. UKUYA
Kwelinye icala, uChicot Álvarez ulilungu lesiseko seMensa sabantu abanesiphiwo kwaye unikela nge-10% yenzuzo evela kwimisebenzi yakhe kwii-NGOs ezahlukeneyo zabantwana abakhubazekileyo, kubandakanya i-FSDM (iMadrid Down Syndrome Foundation).
UDolores Redondo kunye noMarcos Chicot Álvarez baba ngabaphumeleleyo kunye nabokugqibela kwi-2016 Planeta Award, ukhuphiswano oluqhubeka nokongeza ii-editions ezintsha kunye nokuzinikela okuqinileyo kwiingoma zento enye yazo amaqela okupapasha abaluleke kakhulu ehlabathini.
Ucinga ntoni ngeziphumo zale Mbasa yePlanethi?
Umendo opheleleyo kwinqaku: Uncwadi lwangoku » Iincwadi » Ezahlukeneyo » UDolores Redondo kunye noMarcos Chicot, ophumeleleyo kunye nowokugqibela kwi-2016 Planeta Award
Andikhange ndilithenge eli bhaso iminyaka emininzi ngaphandle kwengxelo
Iinqanawa ezibalaseleyo I. "Ndibize u-Ismael"